In Penza, boodbo fiiqan oo ku saabsan qiimaha khudaarta ayaa la duubay. Kormeerka - Nidaamka Baradhada
Penza waxay duubtay boodh fiiqan oo ah qiimaha khudradda. Korjoogteynta
Qiimaha ku dhowaad dhammaan badeecadaha ay wakaaladda wararka ku dartay liistada, marka laga reebo laba shay, ayaa sii waday isbeddel. Isbeddel la mid ah ayaa la arkay bilaha Abriil, Maarso iyo Febraayo. Waxaan bil walba falanqeynaa qiimaha dhowr alaabood oo bulsheed oo ku yaal seddex dukaan oo silsilado ah oo ku yaal magaalada iyo hal suuq. Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa celceliska qiimaha shay kasta.
Qiimaha May waxaa ku yaraaday noocyada khudradda ah (yaanyada, qajaarka, kaabajka iyo toonta), caano, saliid gabbaldayaha, doofaarka, sonkorta, cusbada, ukunta, baastada iyo dalagyo fara badan (bariis hadhuudh dheer leh, digir, boorash dufan, buckwheat). Sidoo kale bishan sicirka ayaa kor u kacay baradhada, karootada, xididdo, basasha, subagga, hilibka lo'da, bur, masago, rooti, ​​boqoshaada iyo jiiska. Qiimaha wali isma bedelin kaliya bowdyaha digaaga iyo rootiga Peklevanny.
Kobaca ugu muhiimsan waxaa lagu arkay qiimaha basasha (+ 29,46%), xididdo (+ 22,79%) iyo baradhada (+ 20,76%). Intooda badani waxay ku dhaceen qiimaha qajaarka (-41,2%), yaanyada (-37,43%), kaabajka (-30,08%) iyo ukunta (-25,32%).
Xusuusnow in aan ku darnay liistada kormeerka alaabooyinkaas oo laga heli karo dukaan kasta iyo suuqa (tusaale ahaan, caanaha, saliidda gabbaldayaha, burka, iwm), iyo sidoo kale noocyada hilibka ee ugu miisaaniyadda badan. Dhowr nooc oo khudaar iyo badar ah, ayaa doorbid laga siiyay kan ugu jaban.
Wakaaladda wararka ayaa fiiro gaar ah u leh xaqiiqda ah in sheygan uusan sheeganeyn inuu yahay khabiir sax ah - waa kormeer caan ah oo sicirka ah si loola socdo isbeddelada suurtagalka ah.
Xusuusnow in Janaayo 1, 2019, sharciga kordhinta VAT, oo ay ansaxisay Duma Gobolka, uu dhaqan galay, boqolkiiba wuxuu ka kordhay 18 ilaa 20. Wakaaladda wararka ayaa sii wadi doonta kormeerka qiimaha.
Mar sii horeysay, wakaaladda wararka ee Penza-Press ayaa soo warisay in gobolka Penza uu xajisto booskiisa marka la eego joogitaanka qiimaha ugu hooseeya ee alaabooyin dhowr ah oo ku yaal gobolka Volga.
Suuqa baradhada Yukreeniyaan Duurjoogta ah
Soo goosashada baradhada Bolivia ayaa hoos u dhacday 15% abaarta awgeed
Warshad gaar ah oo loogu talagalay soosaarka alaabada ilaalinta dhirta, Agoosto-Alabuga, ayaa laga furay Ruushka
Corteva Agriscience wuxuu dhameystirayaa ka goynta DowDuPont
Ku saabsan soo dejinta dabacasaha Ruushka Ruushka Janaayo-Abril 2019
Wareegga Glyphosate ee waaxda beeraha: iibintu way sii kordhayaan wayna sii socon doonaan illaa 2030